कवि, उपन्यासकार, सांस्कृतिक चिन्तक तथा माक्र्सवादी बौद्धिक आहुति विसं २०४० को दशकदेखि नेपालको प्रगतिवादी साहित्य र चिन्तकका रूपमा सक्रिय हुनुहुन्छ । उहाँका ‘तपस्वीका गीतहरू’ र ‘गहुँगोरो अफ्रिका’ दुई कविता सङ्ग्रह, ‘नयाँ घर’ र ‘स्खलन’ दुई उपन्यास प्रकाशित छन् । ‘नेपालमा वर्ण व्यवस्था र वर्गसङ्घर्ष’ समाजशास्त्रीय पुस्तक र ‘दलन’ टेलिशृङ्खला पनि उहाँका प्रभावशाली रचना हुन् । उहाँको ‘गहुँगोरो अफ्रिका’ कविता नेपाली प्रगतिवादी काव्यवृत्तमा दलित मुक्तिचेतना र दलित सौन्दर्यदृष्टिलाई सर्वाधिक मुखर स्वर दिने रचना मानिन्छ । उहाँले नेपाली समाज तथा संस्कृति, दलित मुक्ति आन्दोलन र साहित्य तथा सौन्दर्यचिन्तनका क्षेत्रमा निरन्तर बौद्धिक हस्तक्षेप गर्दै आउनुभएको छ । मूलधारका नेपाली पत्रिका, अनलाइन माध्यम र सार्वजनिक प्रवचनहरूमार्फत तिख्खर सामयिक राजनीतिक विश्लेषण समेत गर्दै आउनुभएका आहुतिका थुप्रै वैचारिक निबन्ध तथा अन्तर्वार्ताहरू विभिन्न पुस्तक, पत्रिका र सङ्कलनहरूमा फुटकर रूपमा प्रकाशित छन् । प्रस्तुत छ, नेपालमा दलित साहित्यको विमर्श, दलित साहित्य चिन्तन, दलित सौन्दर्यशास्त्रलगायत विषयमा मधुपर्कका लागि आहुतिसँग कवि तथा पत्रकार सङ्गीतले गरेको कुराकानी :
दलित साहित्यबारे कुरा गर्दा जात व्यवस्थाको विषय अगाडि आइहाल्छ । सुरुमा नेपाली समाजमा विद्यमान जात व्यवस्थाको विशेषताबारे नै बताइदिनुस् न !
– हिन्दु समाजमा करिब ३५ सय वर्षअगाडि चार वर्ण अर्थात् चार प्रकारको श्रम समूहमा आधारित वर्ण व्यवस्था दक्षिण एसियामा विकसित विशिष्ट वर्गीय समाज व्यवस्था थियो । ती चार वर्ण सारमा चार वर्ग नै थिए । संसारको अन्य भागमा पनि जनसङ्ख्याको वृद्धिसँगै श्रम विभाजन अनिवार्य हुन गयो र भयो तर वर्णव्यवस्थाको श्रम विभाजनमा भने एउटा अतिरिक्त घातक प्र्रणाली लादियो, त्यो हो अनुल्लङ्घनीय श्रम विभाजन । हिन्दु शास्त्रीहरूले शास्त्रमा भएका कतिपय उदार पंक्तिहरूको सहारा लिएर वर्ण भनेको कर्मले निर्धारण गर्ने कुरा हो भनेर तथ्यमाथि जालसाजी गर्ने गरे पनि कर्मले वर्ण निर्धारण गर्ने विषय तत्कालीन शासकले चाहँदा अपवाद व्यक्तिहरूको वर्ण परिवर्तनमा मात्र लागू हुन सक्थ्यो, सिङ्गै वर्णको हकमा होइन । शासक वर्ण वा वर्गका रूपमा रहेका ब्राह्मण र क्षत्रीले गर्ने कर्म गर्न नै वैश्य र शूद्रलाई निषेध गरिसकेपछि वैश्य र शूद्र वर्ण सिङ्गै कसरी शासक वर्णमा रूपान्तरण हुन सक्थ्यो र ? कर्मको आधारमा जो पनि जुनै वर्णमा हुन सक्थ्यो भन्ने तर्क वास्तवमा शिक्षक बन्न तिमी पनि पाउँछौ तर तिमीले पढ्न चाहिँ पाउँदैनौँ भने जस्तै हो, त्यसैले यो तर्क तथ्यमाथिको बलात्कार सिवाय केही होइन ।
यसप्रकार चार वर्णबाट सुरु भएको वर्ण व्यवस्थामा नयाँ समूह जन्मियो अर्थात् सामाजिक बहिष्करणको सजाय पाएको समूह– अछुत । अछुत पाँचौँ अर्थात् ‘पञ्चम वर्ण’का रूपमा जन्माइयो । पराजित विद्रोहीहरू, राज्यबाट विभिन्न सजाय पाएकाहरू, ऋण तिर्न नसकेर टाट पल्टेकाहरू, रक्त पवित्रता कायम राख्न नसकेकाहरू आदि त्यस अछुत समूहमा थपिँदै गए, गाभिँदै गए । जनसङ्ख्याको वृद्धि र समाजको आवश्यकताअनुसार श्रम क्षेत्रहरू थपिँदै गए, अब चार श्रम क्षेत्र मात्रले धानेन । त्यसपछि प्रत्येक श्रम क्षेत्रमा काम गर्ने समूह एउटा जातका रूपमा परिचित र निर्धारित हुन पुग्यो । उपाध्याय र जैसी खालको सामान्य भेद विकसित भए पनि ब्राह्मणभित्र धेरै जात भएनन् । झर्रो, घर्ती, खत्री खालका साधारण भेद भए पनि क्षत्रीभित्र तहगत जातहरू भएनन् किनभने ब्राह्मण र क्षत्रीका निम्ति तोकिएका श्रम क्षेत्रको विस्तार भएन । ज्ञान आर्जन, ज्ञान वितरण, राज्यको नियम निर्माण र ईश्वरसँग सम्पर्क बनाउने ब्राह्मणको श्रम क्षेत्र थप कसरी हुन्थ्यो र ? त्यसैगरी क्षेत्रपालका रूपमा राज्य गर्ने र प्रशासन चलाउने काममा पनि श्रम क्षेत्र नै त्यतिबेला विस्तार आवश्यक थिएन । श्रम क्षेत्रको विशाल जिम्मेवारी सम्हालेका वैश्य, शूद्र र अछुतहरूबीच भने हजारौँ पेसागत क्षेत्रमा उनीहरू विभक्त हुँदै गए, पेसागत क्षेत्रको विस्तारसँगै जातहरू पनि थपिँदै गए । आज सबैभन्दा बढी जातहरू वैश्य र कथित अछुतहरूमा हुनुको मूल कारण यही हो भन्ने प्रस्टै छ । यसरी वर्ण व्यवस्थाबाट सुरु भएको यो प्रणाली अन्ततः जात व्यवस्था बन्न पुग्यो । यसरी समग्र ऐतिहासिक प्रक्रियालाई अध्ययन गर्दा सहजै प्रस्ट हुन्छ, सुरुवातको वर्ण व्यवस्था र त्यो विकसित एवं विस्तार भएर बन्न पुगेको आजको जात व्यवस्था केवल धार्मिक वा सांस्कृतिक क्षेत्रको विषय नभएर यो समग्र आर्थिक–राजनीतिक–सांस्कृतिक प्रणाली हो ।
दलित साहित्य के हो ? यसका विशेषता केके हुन् ?
भारतमा दलित समुदायका रचनाकारहरूले सिर्जना गरेको साहित्यलाई मात्रै दलित साहित्य मान्ने कि गैरदलित समुदायका रचनाकारका दलितमुक्ति विषयक रचनालाई पनि दलित साहित्य मान्ने भन्ने विवाद छ । यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
– पहिलो कुरा त दलितका बारेमा मात्र होइन, जात व्यवस्थाविरुद्ध लेखिएको साहित्य दलित साहित्य हो भन्ने कुरा मैले माथि नै बताइसकेको छु । दोस्रो, दलितले लेखे मात्र दलित साहित्य मान्ने प्रचलन गलत छ । किनभने यस मान्यताले उत्पीडित साहित्यलाई अनन्त फुट विभाजनमा धकेल्छ, अर्कोतिर यस मतले ललितकलाका सबै विधा अनुभूतिको पुनर्सिजन हो भन्ने मान्दैन । साहित्य फोटो हुन्थ्यो भने मिल्थ्यो यो कुरा तर त्यस्तो त होइन । दलितले गर्ने अनुभूति अरूले गर्न सक्दैन भन्ने मान्यतामा नै यो मत टिकेको छ । तर अनुभूति मात्र कला सामग्री होइन । व्यक्तिको अनुभूति स्वयंले मात्र लेखेर साहित्य बनाउन थाल्ने हो भने त एकाध विधाका थोरै रचना मात्र गर्न सम्भव हुन्छ । आम रूपमा हेर्ने हो भने आत्मकथा पनि व्यक्ति एउटाको मात्र अनुभूति लेखेर टुङ्ग्याउन सम्भव छैन किनभने त्यहाँ आफू हुनलाई अन्तरविरोधी अर्को व्यक्ति पनि त हुनैपर्छ, त्यो अर्कोको अनुभूति त आत्मकथाकारले पनि लेख्नैपर्छ । तब आत्मानुभूतिबाट मात्र आम साहित्य कसरी सम्भव हुन्छ र ? दलित लेखकले दलित पात्रलाई नायक बनाएर उपन्यास लेख्दा गैरदलित पात्र खलनायकका रूपमा आउलान्, त्यस खलनायकको अनुभूति कसले लेख्ने त फेरि ? यो सिर्जनविधिसँग मिल्ने कुरा नै हैन । कि त एकालाप मात्र साहित्य मान्नुप¥यो जुन स्वतः गलत हुनेछ । दलित रचनाकारले दलितबारे लेख्दा बढी प्रामाणिक अनुभूति आउने सम्भावना हुन्छ, त्यसमा जोड पनि दिनुपर्छ तर त्यो नै आम सिद्धान्त बनाउन मिल्दैन । साहित्य सिर्जना अनुभूति र परानुभूतिलाई समअनुभूतिमा रूपान्तरण गरेर सम्भव हुने कुरा हो । त्यसैगरी सफल कलाका निम्ति प्रतिभा, सम्पत्ति, समर्पण र भौतिक परिवेश– तीनवटैको भूमिका हुन्छ । त्यसैले त भौतिक परिवेश एउटै भएका दुई लेखकमध्ये प्रतिभावान्ले अब्बल रचना दिन सक्छ, कम प्रतिभावान्ले त्यस्तो रचना दिन सक्दैन । समग्रमा दलित साहित्य जसले पनि लेख्न सक्छ– मुख्य कुरा लेखकले अनुभूति र परानुभूतिलाई समर्पणका साथ इमानदारीपूर्वक यथार्थको पुनःसिर्जनमा लगाउँछ कि लगाउँदैन भन्ने हो ।
नेपालमा दलित साहित्य चिन्तनको परम्परा किन कमजोर छ ?
दलित समुदायबाट विकसित भएर बौद्धिक क्षेत्रमा प्रतिष्ठा हासिल गरिसकेका स्रष्टाहरूले समेत दलित समस्यालाई आफ्नो लेखनमा उपेक्षा गरिरहेको वा कम महìव दिएको आरोप पनि छ । यस सन्दर्भमा रूपलाल विश्वकर्मादेखि तपाईंलाई समेत पनि जोड्ने गरेको देखिन्छ नि !
– यो आरोपभन्दा पनि एउटा दुःखद् यथार्थ हो तर विसं २०५० पछि यस अवस्थामा परिवर्तन आएको छ । दलित समुदायबाट विकसित भए पनि चिन्तनको माहोलको सूत्रधार त गैरदलित नै स्वतः भए, ०५० सालभन्दा अघि । गैरदलित स्थापित साहित्यकारले यस विषयलाई सूचीमै सामेल नगरेको माहोलमा दलित लेखकको दिमागको बनावट पनि मूलतः त्यस्तै बन्ने अवस्था रह्यो । गैरसाहित्य क्षेत्रमा २०४४ देखि नै म यस विषयमा राजनीतिक दस्तावेज (पर्चा आदि) लेखनमा छु तर साहित्यमा सचेत रूपमा सोझै हस्तक्षेप गर्ने साहस जुटाउन चाहिँ मलाई छ वर्ष जति लाग्यो । त्यतिबेलासम्म धेरैको हालत सायद त्यस्तै थियो । आज दलित वा गैरदलित एक हुल साहित्यकारले यस विषयमा कलम चलाउनुलाई गौरव महसुस गर्ने परिस्थिति बनेको छ, त्यो राम्रो पक्ष हो ।
नेपालको शासकीय धाराका समीक्षकहरू छुवाछुत र जातभातविरोधी साहित्य रचनाको जस पनि देवकोटा, समजस्ता ‘ठूला साहित्यकार’लाई दिन्छन् । यो समीक्षाको राजनीतिलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?
त्यसैगरी गद्यमा चाहिँ २०११ सालमा ‘को अछुत ?’ उपन्यासमार्फत मुक्तिराम तिमल्सिनाले प्रखर अभिव्यक्ति दिएका हुन् । त्यसपछिको क्रम लामो बन्दैछ तर यस विषयमा प्रखर अभिव्यक्ति वा दलित साहित्यको वास्तविक जग राख्ने कामको जस भने केवलपुरे किसान र मुक्तिराम तिमल्सिनालाई नै जान्छ । यी दुवै सत्ताविरोधी थिए, त्यसैले शास्त्रीय धाराको समालोचनाले उनीहरूलाई अगाडि ल्याउन चाहेन तर सत्य त एक दिन अगाडि आइहाल्छ, आएकै छ ।
सौन्दर्यशास्त्रका दृष्टिबाट त्यो कस्तो उपन्यास हो ?
नेपालको माक्र्सवादी समालोचना जगत्ले (तपाईं समेत) दलित साहित्यको सौन्दर्यशास्त्रलाई माक्र्सवादी व्याख्या गर्ने र समाजवादी दृष्टिकोण दिने कोसिस गरेको देखिन्छ । त्यसै धाराका केही समालोचक त माक्र्सवादी सौन्दर्यशास्त्र भनेपछि दलित सौन्दर्यशास्त्र भनिरहनु पर्दैन पनि भन्छन् । माक्र्सवादी
सौन्दर्यशास्त्र र दलित सौन्दर्यशास्त्रका समानता वा भिन्नतालाई कसरी बुझ्ने ?
गणतन्त्र स्थापना (२०६५) यताको एक दशकमा प्रकाशित साहित्यमा दलित सौन्दर्यशास्त्रीय कोणबाट प्रशंसा गर्न लायक रचना कत्तिको पाउनुभएको छ ?